CYBERFESTIVAL Nyukireya Chombo Mahara - Nyika Nyika Kurume
musha » Noticias » Rwepamutemo Rezvemitemo » CYBERFESTIVAL Yemahara yezvombo zvenyukireya
Yenyika Yese Tsika CyberFestival YEMAHARA YENYUKU ZVIPONI Zviitiko 190 zvinounganidzwa
Vagari vepasi rose vane mvumo yekupemberera kupinda mukushanda kweChibvumirano cheProhibition yeNuclear Weapons (TPAN) izvo zvichaitika kuUnited Nations musi wa22 / 1/2021. Yakave yakawanikwa nekutenda kumasiginecha nyika makumi masere neshanu nekusimbiswa kwemakumi mashanu neshanu, kwatinotenda nekuda kwekushinga kwavo pakurwisa masimba makuru enyukireya. Mukati meICAN, mushandirapamwe wakaisimudzira uye nekuda kwechikonzero ichi wakagamuchira Mubayiro weNobel Werunyararo muna 86. Mazuva ano, zvinopfuura zviitiko zana nemakumi matanhatu zviri kuitirwa munyika dzemakondinendi ese kuti vatsigire.
Iyi CyberFestival ndeimwe yadzo. Inotarisira kupa mupiro wayo mudiki kune inozoenderera ichikura kudzamara zvombo zvenyukireya zvabviswa zvachose kubva mupasi uye yochinja peji iri chitsauko chine rima chebudiriro yevanhu.
Kwemaawa gumi asina kukanganiswa, chirongwa chemavhidhiyo chichafambiswa kuburikidza neZoom neFacebook chiteshi dzinoongorora zvekare makonzati uye mhemberero dzerunyararo nekurwisa zvombo zvenyukireya zvine nziyo dzekufananidzira, zvirevo, zviito nerutsigiro rwehunhu kubva munyika yetsika, mitambo uye zvematongerwo enyika. nharaunda, zvipupuriro zvezvakaitika uye zvazvino mareferenzi, zvirevo zveNobel Peace Prize, rutsigiro kubva kumaparamende nemaguta, rutsigiro kubva kumasangano, kunyange zviito munharaunda yemagariro evamiriri, vagariwo zvavo, vechidiki uye vana vechikoro izvo nematanho avo, kuratidzira, zvirongwa mu musangano, zvikoro, mayunivhesiti uye zviratidzo zveRunyararo zvinodzivirira zvese zvine chekuita nenyika isina hondo uye, chokwadika, isina zvombo zvenyukireya.
Mune izvi CyberFestival Nyika Yetsika YEMAHARA YEMAOKO ENYU ¡Nhanho huru kune vanhu! Zviitiko zana nemakumi mana zvinounganidzwa umo mazana emasangano nemazana ezviuru zvevanhu vanobva kumakondinendi ese vanotora chikamu.
Zuva: January 23 we2021
Purogiramu: Iyo Cyberfestival ichatanga na10: 30 GMT-0 uye ichaguma na20: 30 GTM-0.
Iwo ekutanga uye ekupedzisira mabhureki, anogara kweawa imwe chete, achapihwa kutepfenyura kweakakosha zviitiko zvesangano zvakaitika nekutangisa kushanda kweTPAN kumuzinda weUnited Nations.
Maawa masere epakati anoenderana nezvikamu zvisere, chimwe nechimwe chazvo chichatanga nesumo pane zviri mukati maro. Zviri mukati zvinenge zvakagadziriswa kune yega nzvimbo yenzvimbo: Oceania-Asia uye Europe-Africa-America.
Zvimwe zviitiko zvezviitiko uye zvine chekuita nekucherechedzwa kwezviito nemipiro yakaratidza nguva.
Vamwe, ruzhinji, zviito uye mipiro yakaitwa mumakore achangopfuura mukuda kwerunyararo uye, kunyanya, kubviswa kwezvombo zvenyukireya.
Iko kune yakadzama chirongwa nezvose zvirimo, mashedhiyo uye vatori vechikamu.
Zvimwe zvirimo: Kuwedzera pane zvataurwa pamusoro apa, zvimwe zvinyorwa uye ruzivo nezve iyo Zviitiko makumi mashanu kuti mazuva ano anoitwa kumakondinendi ese nemasangano eICAN.
Zvakakosha ku kuoneka kweichi chiitiko chitsva chenhoroondo. Sezvo isu tese tichigona kuongorora, kubvumidzwa kweTPAN, kuve chimwe chezviitiko zvakakosha kwazvo pasirese, hakusi pamapeji ekutanga emapepanhau makuru kana kuvhura nhepfenyuro yenhepfenyuro huru dzeTV. Ndiwo mamiriro ezvinhu munyika zhinji dzine hurumende dzakatsigira uye / kana kubvumidza TPAN vagari vayo havazvizive. Iko kune manejimendi yekuviga kwakakomba kwenyaya iyi nenhau. Ndosaka iko kuzvipira kwedu kuita kuti chokwadi chakakosha chionekwe padanho rakakurumbira munzira inokwezva, kuchipa kwakanyanya kupararira uye kutsigira zvishuwo zvevadiki vanhu zviri pachena kuti zvinopesana nezvombo izvi.
Tichifunga nezve iyo yakareba nguva, iyo yekupedzisira yezvinyorwa inonyorwa kuitira kuti igone kuoneswa pane dzimwe nguva zvinoenderana nezvido zveumwe neumwe.
SANGANO: Kunyangwe chirongwa ichi chakasimudzirwa neMSGySV, iyi CyberFestival mhedzisiro yebasa rekubatana revanhu vazhinji nemapoka uye inovhara hwakakura hwakasiyana hwehukama nenyika.
Chishuwo ndechekudzokorora iyi CyberFestival apo boka idzva renyika rinobatana neTPAN, musimba rekukura kusvika rasvika kumagumo
Kutaurirana kwenyika pasina Hondo uye Mhirizhonga panopinda simba reTPAN
DZVANYA KUSIMBISA muCOSTA RICA: